Nezvedu - TAIZHOU HEYA PLASTIC MOLD CO., LTD
HEYA MOLD - Yakasarudzika mu
Kugadzira Mapurasitiki epurasitiki
Tine nyanzvi R & D timu, isu tichava kukura uye gadzirisa epurasitiki anoumba vatengi vedu sezvo muzana zvavanoda uye requirments kwakavakirwa edu zvakawanda kuti makore gumi chakuvhuvhu ruzivo.
TWe tarisa pane ese ekugadzirisa madhizaina epurasitiki jekiseni kuumbwa neakanyanya epamberi ekugadzirisa michina uye yekuongorora michina, ichipa yepamusoro epurasitiki mafomu kune vatengi.
Tinotarisa mukugadzira epurasitiki zvigadzirwa zvemunyika epurasitiki indasitiri misika. Yedu epurasitiki kuumbwa zvinoenderana nematanho epasi rese.
Bhizinesi rekutanga raHeya rinotarisa mukugadzira mapurasitiki epurasitiki ane anopfuura makore gumi ezviitiko. Senge imba yekuumba, kitchenware jekiseni kuumbwa, zvishandiso zvemumba zvigadzirwa, indasitiri uye zvekurima jekiseni kuumbwa, nezvimwe.
Nekwaniso uye hunyanzvi hwedu, zvinobudirira kuita zvakasarudzika maitiro uye imwechete-yekumira muforoma mhinduro kusangana nezvinodiwa nevatengi ndicho chinangwa chaHeya Mould. izvo zviri nyore kushanda nekuchengetedza vatengi.
Isu tinotora nzira yepazasi-yepurojekiti yega yega. Vatengi vedu vanogara vachiona kuwanda kwetraffic, kunowedzerwa brand kuvimbika uye zvitsva zvinotungamira nekuda kwebasa redu
1) Chigadzirwa & Mould Dhizaini
Heya Mould inovandudza uye dhizaina zvigadzirwa & kuumbwa sekuenderana nezvinodiwa nevatengi neve neruzivo R & D timu. Izvo zvinobatsira mutengi wedu ari mune nyowani chigadzirwa kuvandudza, uye chengetedza mutengo wemapurojekiti matsva. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota nyorera yedu yekutengesa dept chero nguva.
2) Mould-kuyerera kuongorora
Heya Mould ichagadzira chakuvhuvhu-kuyerera kuongorora sekuenderana nezvikumbiro zvevatengi, kudzivirira chero mamwe matambudziko ekugadzirwa kwevhu.
3) Mould kugadzira
Heya Mould ichagadzirisa kune vatengi mapurasitiki ekushandisa maturusi ekufambira mberi mishumo pasvondo kazhinji. Nezve chaiyo mamiriro, isu tinosangana newe ipapo.
Heya Mould inopa yakakwana dhizaini kudhirowa uye zvikamu zvevatengi zvisati zvatumirwa. Kune zvakajairika zvikamu zvekupaza, iwe unogona kureva kune yedu runyorwa uye kutenga mumusika wako.
5) Mifananidzo & Mavhidhiyo
Heya Mould inochengeta ese ako mafuru anomhanya mavhidhiyo kwe1years. Isu tinokutumira iwe mapikicha uye mavhidhiyo ekuongorora kana kutaura chakuvhuvhu kumhanya.
6) Service & Kutaurirana
Heya Mould inoramba ichisangana newe padanho rese, kubva pakukurukurirana kwehunyanzvi padanho rekutanga reprojekiti kuenda kune chaiyo-nguva yekutevera panguva yekugadzira chikamu cheiyo purojekiti, kune yekupedzisira-kutengesa tekinoroji rutsigiro rwechigadzirwa .
NYANZVI ZVATINOITA, TITENDEI KUTI IVE CHOKWADI
Ruzivo ruzivo R & D timu ndiyo vimbiso yevatengi chigadzirwa mhando. Kuomerera pane inoenderera hunyowani ndiyo sosi yekugara uchivandudza kweHEYA
Musika wepasi rose
Kubvira pakagadzwa, chigadzirwa chedu chakanakidzwa nemukurumbira wakakwirira mumusika wepasi rese. Vatengi vari muAsia, Europe, Africa neSouth America nyika dzinopfuura makumi matatu. Zvakadai seRussia, Argentina, Columbia, Romania, Brazil, Malaysia, Algeria nedzimwe nyika.